MAHATSINJO-ANTSALOVA : Nodoran’ny dahalo ny tanàna, trano miisa sivy levon’ny afo
Manjakazaka izay tsy izy ny dahalo amin’izao fotoana ary saika isaky ny faritra mihitsy no ahenoana izany. 28 juillet 2017
Raha ny zava-nitranga afak’omaly maraina tao amin’ny tanàna atao hoe Mahatsinjo ao amin’ny Kaominin’i Bemaraha Atsinanana, Distrikan’Antsalova dia nodoran’ireo malaso ny tanàna rehefa avy nanatanteraka fandrobana izy ireo.
Araka ny loharanom-baovao voaray dia andiany maromaro ireo olon-dratsy no niaraka, ka isaky manafika tokantrano dia mampiasa fitaovana sy zava-maranitra izy ireo ka midaroka avy hatrany. Manoloana izay dia tovolahy anankiroa no vaky loha nandritra ny fanafihana. Marihina fa tapitra tanteraka ny omby ao amin’io tanàna io ankehitriny, raha ny tatitra voaray. Rehefa azon’ireo dahalo izay nilainy dia nodorana indray ny tanàna iray manontolo ka trano miisa sivy no kila forehitra tsy nisy azo noraisina intsony.
Tsy afa-nanohitra ireo fokonolona nanoloana ny zava-misy satria betsaka ireto mpandroba no niaraka, etsy andaniny ny tsy fisian’ny mpitandro filaminana tao an-toerana, tamin’io fotoana io. Marihina anefa fa misy “Poste avancé” an’ny Zandary ao amin’ity tanàna ity ary efa misy trano azo ipetrahan’ny Zandary, ka efa nisy ny taratasy fanendrena an’ireo tokony hiasa ao. Ny nahagaga anefa dia tsy nahitana Zandary mihitsy nandritra ny fifandonana.
Raha ny filazan’i Amir Sebastien Chebany Ben’ny tanàna momba ny raharaha dia nanomboka tamin’ny 15jolay no niala teo an-tanàna ireo Zandary ireo, ka mbola tsy tafaverina hatramin’izao. Raha ny tokony ho izy anefa dia tsy nahazo niala tao izy ireo raha tsy misy solony satria efa nahazo fepetra tamin’ny Solombavambahoakan’Antsalova Ramarolahy Maurice. Mandeha ny fanadihadiana rehetra amin’izao fotoana izao raha ny tatitra voaray ihany. Raha tsiahivina mantsy dia efa may nodoran’ny dahalo ihany koa ity tanàna ity tamin’ny taona 2013.
Ny tena manahirana amin’ny fiadiana amin’ny asan-dahalo dia ny fahalavirany satria 50km miala an’Antsalova no misy azy. Manampy trotraka ny tsy fahafahan’ny fiara na moto noho ny faharatsian’ny lalana. Izany hoe tsy maintsy mandeha an-tongotra adiny sivy any ho any vao tonga any amin’io toerana io. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ireo mponina mba hijery ifotony ny zava-misy satria lasibatry ny malaso izy ireo ka very fananana sy very hevitra hatramin’izao.
Andrasana hatreto ny valin’ny famotorana sy ny fandraisan’andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ireo tsy manan-kialofana noho ny hetraketraky ny fanafihana ataon’ireto olon-dratsy.